ချွေးပါမွေးအောင် ရေမွေးဆွတ်နည်း | Myanmar Blog
ကျွန်တော် က သစ်သီးရနံ့တွေကိုကြိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်္ဘောသီး၊ နာနတ်သီး၊ ကတ္တီဘာသီး ဒါပေမယ့် ရေမွေးတွေကိုတော့ကြိုက်ခဲပါတယ်။ သဘာဝကိုပိုသဘောကျပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါးရေမွေးတွေဆိုရင် ဈေးကလဲကြီးပါသေးတယ်။ ယူကလစ်ဆီတို့ဘာတို့တော့ ကြိုက်ပါတယ်။ မသုံးတတ်ရင်လဲ ခဏနဲ့ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နားတွေကို ရေမွေးဆွတ်ရမှာလဲ ?
နားရွက်နောက်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ ခြေကျင်းဝတ် တွေဆိုလုံလောက်ပါတယ် (အနံ့မပြင်းတဲ့ရေမွေးဆိုရင် မေးရိုးအောက်မှာပါဆွတ်နိုင်ပါတယ်။) ဒါဆိုရင် ရေမွေးကသွေးထဲမှာပါစိမ့်ဝင်ပြီး ချွေးမှာပါမွေးနေပါလိမ့်မယ်။ နေရောင်မထိတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်တာမို့ လွယ်လွယ်လဲ မခြောက်သွေ့နိုင်ပါဘူး။
Lavender Oil ဆီဆိုရင် မွေးလဲမွေး ပိုးမွှားတွေလဲကြောက်တာကြောင့် ပိုးမွှားလဲကင်းစင်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကဲဒီလောက်ဆိုရင် ရည်းစားနဲ့ ချိန်းထာရင် ရေးမွေးဘယ်လို ဆွတ်ထားရမလဲသိပြီနော် 😀
~ by Ko Ko Ye` on December 20, 2007.
Posted in အိမ်တွင်းမှု
One Response to “ချွေးပါမွေးအောင် ရေမွေးဆွတ်နည်း”
NanAungOo said this on	September 3, 2017 at 2:17 am | Reply